सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने निधिको प्रस्तावमा पौडेलको समर्थन! :: Setopati
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने निधिको प्रस्तावमा पौडेलको समर्थन! देउवा भन्छन्- गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तिममा पार्टी छाड्नु परेजस्तो विवाद नहोस् भनेर लागिरहेको छु
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ २४
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले १४ औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न राखेको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समर्थन जनाएका छन्।
कोरोना महामारी र क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका काम नसकिएका बेला कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्ने अन्यौलताबीच सर्वसम्मत तवरबाट नेतृत्व चयन बहसमा छ।
बिपी कोइरालाको १०७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा कांग्रेसले बुधबार गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा निधिले उक्त प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए।
‘मैले त सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गरौं भन्दै आइरहेको छु,’ निधिले भने, ‘यसले पार्टीमा एकतामात्र होइन आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।’
उपसभापति निधिपछि बोलेका वरिष्ठ नेता पौडेलले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा समर्थन जनाएका हुन्।
‘सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं,’ पौडेलले भने, ‘सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न यथार्थ आधार त चाहियो नि!, एकएक तर्क अगाडि सारेर कसमा सर्वसम्मत हुन्छ छलफल गरौं न। आधारहरू के-के हुन् भन्ने पनि चाहिन्छ।’
पौडेलले कोरोना महामारी र पार्टीका आन्तरिक काम नसकिएका बेला कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीमा वृहत एकताका लागि न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शी मूल्यांकन हुनुपर्ने पौडेलले बताए। ‘योसँगै त्यागको भावना पनि हुनुपर्छ अनि पो एकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमजोरी ढाकछोप गरेर एकता हुन्न।’
अहिलेकै जस्तो विषय परिस्थिति आउन सक्ला भनेर आफूले महासमिति बैठककै बेला ‘सुनौलो भविष्यका लागि समयवद्ध काम गर्न’ लिखित प्रस्ताव राखे पनि त्यसबेला हतार गरेको आरोप लगाइएको पौडेलको गुनासो छ।
‘मैले तीन वर्षअघिदेखि समयमै काम गरौं भनेको थिएँ। त्यसबेला साथीहरूले मलाई हतार गरिस् भन्नुभयो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसबेलादेखि काम गरेको भए गत वर्ष नै क्रियाशील सदस्यताको काम सकिन्थ्यो फागुनमै अधिवेशन हुन्थ्यो।’
उनले महामारीका बेला कसरी महाधिवेशन गर्ने भनेर अहिले रूवाबासी भइरहेको पनि बताए।
‘समयमा काम गरेको भए यस्तो रूवाबासी हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘समय हुँदा केही नगरी बस्ने अनि अहिले परिस्थिति विषम भयो भनेर के गर्ने? पार्टीमा संकट आइसकेको छ। तर यो संकट कसले गर्दा आयो?’
उनले नेविसंघलगायत भातृ संस्थाको अधिवेशन नेतृत्वले समयमा गराउन नसकेकोले भद्रगोल अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए।
‘महाधिवेशनमा भातृ संस्थाबाट प्रतिनिधि आउनुपर्छ। अधिवेशन नै भएको छैन कसरी प्रतिनिधि ल्याउने?,’ उनको प्रश्न छ।
उक्त कार्यक्रममा धारणा राखेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले फागुनमा महाधिवेशन नहुने प्रष्ट संकेत देखा परेकोले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवासँग माग गरेका थिए।
‘महाधिवेशन कार्यतालिका पुरै प्रभावित भइसकेको छ। साउनभित्र सक्ने भनेको क्रियाशील सदस्यता वितरण अझै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन फागुनमा हुँदैन भन्ने संकेत पाइसकेका छौं। अब केन्द्रीय समिति बोलाऔं त्यहीँ जीवन्त छलफल गरौं।’
नेताहरूका कुरा सुनेका सभापति देउवाले पार्टीमा विवाद नहुने गरी आफूले काम गरिरहेको दाबी गरे।
‘गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तिम समयमा पार्टी छाडेकै हो। साँचो कुरा लुकाउन हुन्न,’ उनले भने, ‘त्यस्तै विवाद नहोस् भनेर म लागिपरेको छु।’
आफू १४ औं महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ भन्नेमा रहे पनि कोरोनाका कारण त्यो अब सम्भव नहुने हो कि भन्ने देखिएको देउवाले बताए।
‘महाधिवेशन हुनुपर्छ। फागुनमै गर्ने कि केही पर सारेर गर्ने भन्ने साथीहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो। म एक्लैले भनेर हुन्न,’ देउवाले भने, ‘कोरोनाले गर्दा फागुनमा महाधिवेशन हुन सकेन भने मैले के गर्ने? सार्नु त पर्छ नै। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार छ महिना थप गर्न मिल्छ। त्यो अवधिमा पनि अधिवेशन गर्न सकिन्छ। संविधानले दिएभन्दा बढी अवधि बढाउन मिल्दैन भन्ने त मलाई पनि थाहा छ।’